Booliis baadigoob xoogan ugu jira tuugadi ugu saqajaan saneed ebid kadib markii ay xadeen Nin dhintay Madaxiisa - iftineducation.com
aadan21 / July 15, 2012
iftineducation.com – Booliiska Dalka Koonfur Afrika ayaa baadigoob xoogan ugu jiro kooxo tuugo ah oo dhawaan xatooyo u geystay nin dhawaan la aasay kana xaday madaxiisa.
danbibaarayaasha ayaa raadinay madaxa Ezekiel Motloung, oo ah 42 jir Isbuucii i horre la aasay kadib markii uu geeriyooday.
Thulani Ngubane oo ah afhayeen u hadlay booliiska ayaaa yiri’’ waxay u muuqataa tuukada in ay ku qoteen xabaasha Mr Motloung saacado ku gudahood sabtidi la soo dhaafay ,wuxuu kaloo dhahay arinkaan waa wax la yaab leh misne argagaxeeda wadato.
ninka waxaa aastay qoyskiisa jacel laakiin wuxuu noqday mid uu ku dhaco xabashiis arinkan.
“Ma ogin sababta uu qof uu u sameeyo arinkan isagoo xitaa uusan iibsanaynin,laakiin waxa soosaari doona baritaanka.
Ngubane ayaa yiri waxaan hay’ada danbi baarista waxay go’aamin doontaa oo ay sheeki doontaa waxa loo gooyay madaxa Mr Motloung ,kaas oo ay qoyskiisa ku aasteen magaalada Wolmaransstad oo ku taal waqooyi galbeed Koonfur Afrika.
qaraabada Mr Motloung oo ka wal walsan dhacdadan layaabka leh ayaa sheegay in arintan ay tahay welwel iyo danbi cajiib ah.
Ninkan dhintay eedadiis oo lagu magacaabo Abia Mathekga-Leseisane ayaa u sheegtay jariirada South Africa’s Sowetan in qowskoodu ay ka sii digeen in uu wax ku dhici doono xabshiisa .
waxay tiri waxaa la aasay labo qof bes isla maalintaas, wuu ogaa xabaasha uu ahaa Ezekiel’s, oo ay ula jeeday kuwa xaday in ay ogaayeen goobta uu ku xabaalnaa wiilka ay eedada u tahay.
Hooyada dhashay ninkan ayaa xaaladeeda loo yaabay oo isbitaal loola cararary ka dib marki ay aad uga wal-washay waxa ku dhacay wiilkeeda..
Brigadier Ngubane oo ah Afhayeenka booliiska ayaa yari ‘’ wali looma soo xirin dad lala xiriirinayo dambigaan argagaxa leh wuxuu intaas ku daray danbibaarayaashu in ay baarayaan kuwa falkan ku kacay in ay ujeedadoodu ahayd xabaasha Mr Motloung ama in ay ahayd hab ku sababaysan rumaysnaanta sixir.